ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: ကျနော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော မြောက်ပိုင်းအေဘီ-၃
နံပါတ်(၁)မိုးကြီး....ABSDFမြောက်ပိုင်းမှာ ဘယ်သူမှမရောက်သေးခင် မိုးကြီး
အဲဒီအောင်မြင်မှု့ ကို မျိုးဝင်းကအရမ်းသတ်ချင်ခဲ့တယ်..မသွားခင်ကတည်းကစောစိုးစိုး(kayinlay)ကိုအပြစ်ရှာဖို့ ထည့်ပေးလိုက်တယ်..
မျိးဝင်းရဲ့ အကြံအစီကတိုက်ဆိုင်မှု့ မဟုတ်ပါဘူး..ကြိုတင်ကြံစီမှု့ ပါ..
လက်နက်တွေသယ်လာတဲ့အတွက် မိုးကြီးမှာ စိန်ဗေဒါဇော်ကြီးရဲ့ လက်စွမ်း
ပြသာနာတွေဖြစ်တော့ အခြေအနေတွေကို နားအလည်နိုင်ဆုံးကမိုးကြီးပါပဲ.
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာက ရေနစ်နေတဲ့လူအချင်းချင်း သူများကိုကယ်ဖို့ ဆိုရင်ကိုယ့်ကြိုးကိုကိုယ်အရင်ဖြေရပါတယ်.
ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇောတို့ ဆီကနေပြီးတော့လက်နက်တွေကိုရအောင်ယူလာနိုင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်က ....သူ့ ကိုသတ်မှာလဲသိသိကြီးနဲ့ တပ်ထဲမှာဘာကြောင့်
ခိုဖြူကမထင်မှတ်ပဲနဲ့ ၁၉၉၁ခုနှစ်သင်္ကြန်အတွင်းမှာ ဗဟိုကောင်မတီဝင်အောင်ကြီးကိုဓားနဲ့ လိုက်ခုတ်တယ်.အနောက်မှာဦးစော
နဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ပါတယ်.ဒီအပြင်မျိုးဝင်းမွေးထားတဲ့ ကွန်မန်ဒိုတွေနဲ့ ပြသာနာဖြစ်တယ်အဲဒီမှာလည်းစောယဉ်ထွေးနဲ့ ကျွန်တော်ပါတယ်..ဒီပြသာနာလောက်ကလွဲရင်ကျန်တဲ့ကိစ္စခိုဖြူကိုညှိုးစရာအကြောင်းမရှိဘူး..
ညီညီကျော်............သူနဲ့ ပတ်သက်လို့ မပြောခင်ကျွန်တော်အကြောင်းကို
နည်းနည်းလေးပြောပြချင်တယ်.ခင်ရွှေလှိုင်ရယ်၊ပြည့်စိုးနိုင်၊WANNA ZAW၊အောင်ကျော်မြင့်၊ဇော်မိုး၊ကိုတိုးကြည်နဲ့ ကျွန်တော်၄၀၁ကနေပြီးတော့
ဗဟိုကိုတက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကိုသံလွင်က
ပြီးတော့သူ့ ကိုဘယ်လိုအပြစ်ဒဏ်မျိုးမှမပေးပါနဲ့ လို့ မျိုးဝင်းအပါအဝင်..
ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်.......လူတွေမှာ တာဝန်ကိုယ်စီရှိနေရင်ဒီအဖွဲ့ အ
အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော့်ကိုကိုဖေဝင်းဆီမှတဆင့်မင်းဇော်ရဲ့ လက်အောက်က
အဲဒီမှာ ကျွန်တော်သိလိုက်ရတာကသတ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိထားတာအားလုံးက
အခုနလှေကြီးပေါ်ကိုလှေငယ်ဆင့်တယ်ဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့ သတ်ဖို့ ကြိုးစားတာခံ
ရတဲ့လူကတော့ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဂျက်စပဲရိုးညီညီကျော်ပါပဲ....
သံချောင်းတို့ အောင်နိုင်တို့ အကုန်လုံးသိပါတယ်........ဂျူးဂျူးအပါအဝင်ပေါ့..ညီညီကျော်ကိုကြည့်လို့ မရပေမယ့်သူ့ လုပ်ရပ်မှန်နေတော့သူ့ ဆီမှာပဲ
ညီညီကျော်ကိုမျိုးဝင်းကသတ်ဖို့ ဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲဆိုတာ ထပ်ရေးပြပါ့မယ်................
ဘရာဇီး ငှက်ရိုး and6others like this.
Maung Than Swe စောင့်ပြီးဖတ်နေပါတယ်။ဆက်ပြီးဖြန့်လိုက်ပါတယ်။
Min Tharr ဒီလိုအချက်အလက်နဲ. တုန်.ပြန်ရေးသားချက်တွေကို လေးစားပါတယ်
Kayin Lay ကျော်စွာဝင်းမောင်..မင်းရွှီးလုံးက နားထောင်ကောင်းလှချည်လားကွာ...ဘယ်တုံးက ငါ့ကိုမဘိန်းသိန်းအောင်တို့နဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာလဲ...မင်းရထားတဲ့ငှက်ဖျားက ခုထိမပျောက်သေးဘူးလား..ပုလင်းလုပ်သောက်ကွာ... ငါမိုးကြီးတို့ မဘိန်းသိန်းအောင်တို့ နဲ့ တခါမှမတွဲဖူးဘူးကွ..မင်းသိလား..တခုတော့ရှိတယ်..သူတို့ အားလုံးက ငါ့ရဲ သင်တန်းသားတွေဖြစ်ဘူးတယ်... မင်းသူများတွေပြောလို့ လိုက်ပြောရတာမျိုးမလုပ်နဲ့ ..၀ါးတားတားသိပ်မလုပ်နဲ့ ကျော်စွာဝင်းမောင်...ငှက်ဖျားမပျောက်သေးရင် ဆေးမှန်မှန်သောက်အုံး။။ငါမင်းရေးတဲ့တခြားဟာတွေဆက်မဖတ်တော့ဘူးကွာ..ထပ်ဝါးတာတွေ့ မိရင် ထပ်ဟားရမှာစိုးလို့ ...မင်းရေးတာသိပ်သေချာတယ်ဆိုရင် ကိုမိုးကြီးမင်းတို့ ရန်ကုန်မှာပဲမဟုတ်လား... သူ့ ကိုမေးကြည့်အုံး.. သူတို့ ကန်ပိုက်တီးလက်နက်ယူဖို့ သွားတာ ငါ့ကိုထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ ငါ့ကိုယ်ငါတောင် လက်နဲ့ ပြန်ဆိတ်ပြီးမေးရမလိုဖြစ်နေပြီ..ဗလာချည်ကြီးလျောက်မရွှီးနဲ့ ကွာ...လူသနားစရာကနေ သောက်မြင်ကပ်စရာဖြစ်အောင်မါလုပ်နဲ့fact နဲ့fiction ကိုကွဲအောင်ရေး..မဟုတ်ရင် သမိုင်းကွေးသွားလိမ့်မယ်
Kayin Lay မင်းရဲ့ ဆရာတွေက ဖေ၀င်းနဲ့ မင်းဇော်ဟုတ်လား..ခေါ်မေးမရတဲ့မင်းကိုခိုင်းတဲ့ကိုမျိုးဝင်း...ဖေ၀င်း..မင်းဇော်..ဟားဟား အကုန်သေပြိးသားလူတွေပါလားကွ... မင်းကိုငါမှတ်မိတာတခုပဲရှိတယ်..၈လေးလုံးတိုက်ပွဲအသွား တောင်မတက်နိုင်လို့ အမ်၂၁လေးပိုက်ပြီး တောင်စောင်းနံဘေးမှာ မျက်လုံးလေးကလယ်ကလယ်နဲ့ ခွေခွေလေးကျန်ခဲ့တာပဲကွာ... စစ်တိုက်၇မယ်ဆိုတော့ ကြောက်ဖျားဖျားသွားတာလားတော့မသိပါဘူး...မင်းရေးတဲ့စာကိုမင်းတာဝန်ယူရဲတယ်ဆိုတော့ ခုမင်းကိုငါ စမေးပြီ... ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီး မင်းဘယ်လိုသက်သေပေးမှာလဲ...ကိုမိုးကြီး..မဘိန်း (ဦး)သိန်းအောင်တို့ နဲ့မင်းမျက်နာချင်းဆိုင်မေးချင်သေးလား... အရိုးပုံပေါ်ထိုင်းပြီး နံမည်ကြီးအောင်မလုပ်ချင်ကြနဲ့ ကွာ...
Ko Lin Wai Aung Kyawzwar Winmg က အင်တာနတ်လိုင်းမမိတဲ့နေရာမှာရောက်နေလို့ ကျနော့်ကိုဆက်သွယ်ပြောကြားလာပါတယ်...သူ့ post မှာရေးထားတဲ့ စောစိုးစိုး(kayinlay) အစား စိုးစိုး (နမ္မား) လို့ပြင်ဖတ်ပေးပါတဲ့ခင်ဗျား...
Kayin Lay ဟုတ်လား။ ခုမှကြောက်ချေးမပန်းနဲ့ကွ။ စိုးစိုး နမ္မားကလဲ ရေကြီးတဲ့ထဲ ပါလို့သေပြီးသားလူ။ အကွက်စေ့လှချည်လားကွာ။ ကရင်လေးလို့တောင် ကွင်းစ ကွင်းပိတ်ကြီးထည့်ရေးထားပြီးမှ။
ဘရာဇီး ငှက်ရိုး သူ့မမြင်ရ ကိုယ့်မမြင်ရတော့ ဖြစ်သွားပြီ... ကိုကရင်လေး မန့်တာတွေကို ဟိုဘက်ကနေ လာဖတ်နေရတယ်... ဟူးးးးးး
Kayin Lay ကိုရဲ နောက်ဆုံးကွန်မင့်ကို ဘာဖြစ်လို့ ပြန်ဖျက်လိုက်တာလဲ။ ခုပဲလိုက်ူမိတယ် ကရင်လေးရေ။ သူမှားရေးထား တာပါ ဆိုတာလေ။ ဖျက်စရာမလိုပါဘူးဗျာ ။ ကျနော်တောင် အလွတ် ရ နေ ရင် တခြားလူလဲ ဖတ်မိလောက်ပါတယ်
Ko Lin Wai Aung ကရင်လေးရေသူမှားရေးတာပါလို့ပြောတယ်..စိုးစိုးနမ္မားနဲ့မှားတာပါ
Ko Lin Wai Aung လိုင်းမကောင်းဘူး..ကားပေါ်ရောက်နေတာ
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 9:14 PM